မင်းညွှန့်လှိုင် – တ က ယ့် အ ဖြ စ် အ ပျ က် | MoeMaKa Burmese News & Media
တ က ယ့် အ ဖြ စ် အ ပျ က်
လီယာခေါ်တာလီကို ရော်ဟီးမူလာက အကြွေးဆပ်ဖို့ရှိတယ်
အဲဒီနေ့က ရော်ဟီးမူလာနဲ့ လီယာခေါ်တာလီတို့
ဒါနဲ့ ရော်ဟီးမူလာက ဆိုင်အပြင်ထွက်သွားတယ်
ဆိုင်အပြင်လမ်းပေါ်ရောက်မှ ရော်ဟီးမူလာက ဆဲဆိုပြန်တယ်
ခဏနေတော့ လီယာခေါ်တာလီပါ ဆိုင်အပြင်ထွက်သွား
လီယာခေါ်တာလီ ဒဏ်ရာရ အဲဒါနဲ့
မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာပါဗျာ ။ ။
၁ မေ ၂၀၁၄
One Response to မင်းညွှန့်လှိုင် – တ က ယ့် အ ဖြ စ် အ ပျ က်
catwoman on May 6, 2014 at 8:28 am
huh? what s so special about people getting into fights? it happens everyday????